नेपाली सेनाका पूर्व जवानको हर्कत : गर्भमा ३ महिनाको बच्चा हुँदा एउटी महिलाले म हुँ श्रीमती भन्दै आइन्, विदेश गएपछि उतै अर्की श्रीमती (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/नेपाली सेनाका पूर्व जवानको हर्कत : गर्भमा ३ महिनाको बच्चा हुँदा एउटी महिलाले म हुँ श्रीमती भन्दै आइन्, विदेश गएपछि उतै अर्की श्रीमती (भिडियो हेर्नुस्)
नेपाली सेनाका पूर्व जवानको हर्कत : गर्भमा ३ महिनाको बच्चा हुँदा एउटी महिलाले म हुँ श्रीमती भन्दै आइन्, विदेश गएपछि उतै अर्की श्रीमती (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । विवाह भएको छोटो समयमा नै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध किन विग्रन्छ । श्रीमान श्रीमतीवाट अभिभावक बनिसकेर पनि सम्बन्ध विग्रदा त्यो बच्चाको भविष्य के होला ? पूर्व नेपाली सेनाका जवाफ जसले प्रेम विवाह गरे । विवाह पछि उनले परिवारकै सल्लाहमा जागिर छोडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी वाहिर गए । पार्वती रावल सुर्खेत माइत रहेकी उनी विवाह गरेर महादेव खड्कासंग विवाह गरेर महेन्द्रनगर पुगेकी थिइन् । उनीहरुको प्रेम विवाह भएको थियो ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
पार्वतीको भिनाजु पनि सेनामै थिए । उनी भिनाजुलाई भेट्न जाँदा महादेवले देखेका थिए । महादेवले नै पार्वतीका भिनाजुसंग उनका बारेमा सबै बुझेका थिए । भिनाजु मार्फत चिनजान भएर उनीहरुको विवाह भएको हो । उनीहरुको काठमाडौमा चिजान भएको हो । रामवहादुर विष्ट उनको भिनाजुको नाम हो । तलेजु भवानीमा महादेवले ड्युटी गर्थे । आफ्नो वुवाको निधन भएका कारण भिनाजुलाई नै उनले अभिभावकका रुपमा लिएकी थिइन् । त्यसैले भिनाजुले महादेवले प्रेम प्रस्ताव राखेको बताएका थिए ।
त्यतीबेला भिनाजुले महादेवका बारेमा राम्रै कुरा गरेपछि उनले विवाह गर्ने निधो गरिन् । घरवाटै भब्य विवाह गर्ने तयारी गरेकै बेलामा पार्वती गर्भवती भइन् । त्यसपछि उनीहरुले मन्दिरमा गएर विवाह गरेका थिए । विवाह पछि महादेवको मोवाइलमा युवतीहरुको फोन आएको थाहा पाएपछि उनले सोधिन् । विवाह भएको केही समयमै अर्की महिलाले महादेवलाई आफ्नो श्रीमान भनेर दावी गर्दै कानुनी प्रकृयामा जाने बताइन् । पार्वती गर्भवती भएको तीन महिनामा श्रीमानलाई अर्को महिलाले फोन गरेर महादेव मेरो श्रीमान हो उनीसंग मेरो ५ वर्षको बच्चा छ भनेर श्रीमानलाई फोन गरेको आफुले सुनेको बताइन् ।
त्यसपछि ति महिलाले आफु प्रहरी इन्सपेक्टर हो भन्दै ज्यान लिने ध म्की दिएको बताइन् । तर केही समय पछि त्यो कुरा त्यसै सेलाईपछि उनी अब परिवारको लागि सेनाको जागिरले पुग्दैन म भिक्टोरिया जान्छु भनेर सल्लाह गरेपछि उनले आफ्नो गहना बेचेर विदेश पठाएकी हुन् ।
उनले त्यसका लागि १० लाख रुपैया जम्मा गरेकी थिइन् । तर विदेश गएपछि पनि राम्रै सम्बन्ध भएक श्रीमानले अचानक विवाह गरेको खबर उनले देवरवाट थाहा पाइन् । उनले काठमाडौमा आएर अर्काको भाँडा माझेर छोरी हुर्काएर बसेकी थिइन् । मध्यरातमा देवरले फोन गरेर दाईको त विवाह भयो भनेर अर्की महिलासंगको तस्बिर पठाएको बताइन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
झुटो बयान दिएपछी सु`ष्मालाई हुनेभो 25 वर्ष जेल सजाए ! (हेर्नुहोस भिडियो)
साउदीबाट श्रीमानको चित्कार ! बच्चा छोडेर श्रीमती पैसा लिएर फरार.. (हेर्नुहोस भिडियो)
प्रधानमन्त्री का यी चार कदम जसले भारत हल्लियो,बिदेशी मीडियाले भन्यो भारत हल्लाउने नेपालको पावर देखियो भिडियो हेर्नुहोस
कालिज पाल्नेले एक पटक भिडियो हेर्नुहोस६ महिनामा ३५ लाख यसरी कमाऊन सकिन्छ(भिडियो)